Maalinta: Maarso 7, 2018
Dowladda Hoose ee Magaalada Caasimadda waxay sameysay qorshe cusub saacadaha shaqada ee gaadiidka dadweynaha. Xeerar cusub oo ah saacadaha gaadiidka dadweynaha ka dib baahida weyn ee laga qabo muwaadiniinta iyo bilowga simistarka labaad ee dugsiyada [More ...]
Bilaashka Bilaashka ah ee Haweenka ee 8 Maarso ee Diyarbakir
Dawlada Hoose ee Magaalada Diyarbakir, 8 Maarso Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka ayaa bixin doonta adeeg gaadiid oo bilaash ah haweenka. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, 8 Maarso Maalinta Haweenka Caalamiga ah sababtuna tahay gaadiidka dadweynaha ee dawlada hoose [More ...]
Tababarka Tababarka ee Lataliyayaasha Socdaalka ee Magaalada Adana
Duqa magaalada Adana Hpolseyin Sözlü ayaa sheegay in Adana ay tahay shaqaale dowladeed. [More ...]
5 Metro Line si loo furo adeegga cusub ee Istanbul
Duqa Magaalada Istanbul Mevlüt Uysal'dan dadka reer Istanbul ayaa u yimid inay is dejiyaan si loo sharraxo. Uysal wuxuu sheegay in illaa Diseembar, XeroX metro station loo furi doono adeegga. Xariiqda 5-kiloomitir dhererkeedu yahay 267 ayaa socota [More ...]
Sii wad baabuurta Tram
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, xafiiski hore ee xafiiska dhismaha barxadda iyo baarkinka. Marka mashruuca la dhammeeyo, mashruuc casri ah ayaa gobolka laga heli doonaa. Lixda meelood ee mashruucan la carqaladeyn doono [More ...]
Cankesen oo booqanaya Goobaha Ganacsiga ee Ushak
Sarkaalka Gaadiidka - Gudoomiyaha Can Canesesen booqashooyinka aan kala joogsiga lahayn ee gobolka ayaa wali socda. Wareegtadan dhexdeeda, Cankesen, wuxuu booqday saraakiisha ka hawlgala xarumaha ku xiran laanta adeegga gaadiidka ee Uşak, [More ...]
Caqabadaha Lodos Caqabadaha Caadiga ah
Bursa-Uludag, oo bixisa gaadiid kale oo u dhexeeya duulimaadyada sababo la xiriira xaaladaha cimilada xun awgeed ayaa la joojiyay maanta. Marka loo eego macluumaadka la helay, sababtoo ah dabaylaha xoogan ee magaalada ka jira qiyaastii qiyaastii 20 ilbiriqsi kasta [More ...]
Gaadiidka ku yaalla İzmir si uu u sameeyo nolol kale
Gudoomiyaha qolka howlgab ah Hanefi Caner, ayaa soo jiitay shilalka gawaarida. Caner oo raba in talaabooyin gooni ah laga qaado meelaha ay badan yihiin dadka lugeynaya, "Noloshu ma sii jirto," ayuu yiri Afet Soyer, 66, sanadkii hore. [More ...]
Dhismaha Isgoysyada Gawaarida ee Dogancay ee Aagga La Ilaaliyo
In kasta oo aagga Saldhigga Tareenka ee Sakarya Doğançay uu ku yaallo waa dhul dabiici ah oo la ilaaliyo, dhismo xad-dhaaf ah oo la taaban karo ayaa lagu bilaabay go'aanka TCDD. Midowga Shaqaalaha Shaqaalaha Gaadiidka (BTS) [More ...]
Xarunta Ketem ayaa soo jiidan doonta fiirsashada kansarka
Si loo soo jiito muhiimadda baaritaanka hore ee kansarka, magaca metro station waxaa loo beddelay “KETEM Station bir asbuuc iyadoo lala kaashanayo Agaasinka Caafimaadka ee Bursa iyo Maareynta Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa (BURULAŞ). [More ...]
Waxay qabtaan shaqooyinka ugu adag ee ku yaala gees kasta ee Izmir
Haweenka ka shaqeeya qaybo kala duwan oo ka mid ah Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay siisaa midab iyo midab meelwalba oo magaalada ah meesha ay ku nool yihiin, amaanka ilaa nolosha iyo hantida ilaa gaadiid iyo nadiifinta. Iyagu waa kuwa ugu dhibta badan gees kasta oo Izmir ah. [More ...]
Hal kali ah ee loogu talogalay Izmir
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, CHP, MHP iyo Good Party ayaa booqday madaxda gobolka Izmir, Ankara, fayl ku saabsan mashaariicda la sugayo ee la sugayo. Wadashaqeynta iyo wada hadalka Izmir inta lagu guda jiro booqashada [More ...]
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Wasiirka Dhaqaalaha Azerbaijani Sahin Mustafayev, Madaxweynaha Azerbaijan Railways Cavid Qurbanov, Madaxweynaha Waddooyinka Joorjiyaalka David Peradze, 30 Oktoobar-2017 [More ...]
Dhibaatada Tareenka Sare ee Malatya
Ururka Ganacsiga Tareenka iyo qaar ka mid ah wakiillada ururka oo xiriir la leh Türk İş ayaa booqday Enver Kiraz, Guddoomiyaha CHP. War-saxaafadeed intii lagu jiray booqashada, Madaxweynaha Midowga Nurettin Öndeş, oo soo saaray arrinta tareenka xawaaraha sare, [More ...]